Ama-Olympics ka-2016 eRio azophazamisa izinhlelo zePSL | News24
Ama-Olympics ka-2016 eRio azophazamisa izinhlelo zePSL
UKUQALA kwesizini kwesizini ezayo yePSL kungenzeka kuphazamiseke kakhulu ngenxa yama-Olimpiki eRio De Janero eBrazil kuwo lo nyaka.
Ngenxa yale midlalo edume umhlaba wonke, phecelezi Olympics, izinkomba zithi izinhlelo zeligi ngesizini ezayo noma entsha zizophazamiseka kakhulu.
Imibiko ibuye ithi ngenxa yale midlalo isikhathi esingangenyanga esizodleka noma esizodingeka ngenxa yamaqembu aseMzansi azobe ekhona. Phela kuzokhumbuleka ukuthi iqembu laseMzansi elibizwa ngokuthi Team South Africa lizenzele umlando ngalo nyaka ngobe lizobe limelwe yiBanyana Banyana neSA Under 23 yabesilisa. Okuletha amathemba ngamalungiselelo ukuthi izinhlangano ezithintekayo, iSouth African Football Association (Safa), PSL neSascoc zibukeka zizimisele ukusebenzisana ngokuzwana, lokho okungenza amamedali azowinwa athi ukuthi xaxa. Imidlalo yalolu hlobo, ama-Olimpiki (Olympics) ixuba imidlalo eminingi njengezokusubatha, isibhakela, ibhola, abaqubuli bezinsimbi, izikebhe, imicibisholo kanye neminye.
Iqembu labesilisa abangaphansi kweminyaka engamashumi ababili nantathu (men’s U23 team) yazicabela indlela eya eBrazil emva kokuphuma isithathu emidlalweni yama African Under-23 Championship eSenegal ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Le midlalo ibhekeke ukuthi iqalwe zi-3 kuya 21 kuNcwaba. IPSL isanda kukhipha umbiko othi ngisho nemidlalo yeNational First Division (NFD) nayo izohlehliswa ukuthi uMzansi uqoke iqembi eliqinile neliyozibamba ziqine eRio (Brazil).
Isikhulu esibhekene nokuhlelwa kwemidlalo yePSL uDerek Blanckensee uthe miningi imininingwane nezimo ezibhekeleliwe nezinye ezisazocutshungulwa isigungu sakhe esikhulu sePSL (executive committee) ukuze izinhlelo zingaphazimiseki futhi kusetshenzwe kahle.
“Khona ukusebenzisana nemihlangano mayelana nama-Olimpiki iyathembisa futhi kusetshenziswana ngomoya omuhle ngoba phela zonke izinhlaka zibambisene. Kodwa-ke mangisho ukuthi okuningi kuzocaca khona maduze,” kusho Blanckensee.